Ummata keenya Oromoo dararama ulfaataa keessummeessaa jiruuf waan dandeenyuun haa birmatnuuf! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Kichuu
HomeAfaan OromooNewsUmmata keenya Oromoo dararama ulfaataa keessummeessaa jiruuf waan dandeenyuun haa birmatnuuf! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Ummata keenya Oromoo dararama ulfaataa keessummeessaa jiruuf waan dandeenyuun haa birmatnuuf!
Daguuggaa sanyii uummata keenya Oromoo irratti raawwataa jiru utuu arginuu, utuu dhageenyuu callisuu hindandeenyu. Mootummaan rakkoo Adda Bilisummaa Oromoo waliin qabu karaa nagaa furuu didee waraanaan ABO balleessuu irratti hojii hojjetaa jiru cimsinee balaaleffanna. Nuti kan qabsaa’aa turreef nagaan Oromoo akka deebi’uuf malee, araddaan Oromoo xiyyaara waraanaan akka barbadaa’uuf miti.
Hoggana EPRDF afaan Qawween rasaasaan nu ajjeesu bakkaa kaafnee, hoggana Elekoopteraan daguuggaa sanyii raawwatu ofirra bulchuufis qabsoon goone hinjiru. Kun ta’ee utuu jiru mootummaan akkuma “yoo dogoggora raawwatne dhiifama gaafanne beenyaa kaffalla” jedhee dhaadatetti lubbuu lammilee keenyaa guyyaa kaleessaa Qellem Wallaggaa keessatti Xiyyaaraan Boonbii rafarafuudhaan akeeka jallataa, garajabummaan raawwateen ilmaan Oromoo nagaa lakkoofsi itti hinbahin barbadeesse. Kana biratti manneen Barnootaa guutummaatti bakkoota addaa addaatti Elekoopteraan rukuutuudhaan barbadeessee jira. Akeekni akkanaa uummata irratti raawwachuun barnootaan ala Oromoo taasisuuf kan adeemaa jiruuf yaalaa dhabanii uummatni akka dhuman gochuun akeeka Daguuggaa sanyii keessaa tokko ta’uu hubanna. Gochaa kana eenyuun olitti, sirna Oromoo hacuucaa tureen olitti waan nurra geessisaa jiruuf kan balaaleffannu ta’uu Qeerroo Bilisummaa Oromoo nii hubachiisa.
Akkasuma saamichi dhaabbilee hawwaasaa kanneen akka mana Qorichaa fi manneen Baankii irratti adeemsifamaa jiran, utuu waraanni mootummaa uummata daguugaa jiranii saamicha dabalee raawwatamaa jiru cimsinee balaaleffanna. Hidhaan lammilee nagaa Oromoo irra bakka maratti raawwataa jiru mootummaan halduree tokko malee dhaabu akka qabu Oromoon bakka maraa nu cina dhaabbatee gaafaachuu akka qabu dhaamna!
Kanaaf bakka maraa waliif dirmachuutiin Oromoo waan qabuun akka wal bira dhaabbachuu qabnu, mootummaa uummata nagaatti Boonbii Xiyyaaraan roobsaa jiru yakka suukaneessaa raawwataa jiruu irraa akka of qusatuuf qaamotni daguuggaa sanyii raawwataa jiranis gaafatama akka fudhachuu qabaniif addunyaatti gama danda’u maraan uummatni Oromoo akka lallabee himatu gaafanna.
Addisuu Araggaa #Yuunivarsiitii__Finfinnee yeroo turetti maqaa amantaa Kiristaanaa Ortodoksii tokkummaan Yuunivarsiitii keessatti of hin ijaarreef ajaja wayyaanota irraa fudhataa tureeni.
Addisuun guyyaa mooraa oola galgala wayyaanota waliin manneen dhugaatii Kaazaanchiisa waliin gahaa bulee ganama dadhabaan isaa mooraatti deebi’a.
Walakkaa rafee yoo danda’e kan sa’a boodaa dareen yoo jiraata barataa ture. Qabxii yoo kufe tika mootummaan doorsisee qabxii sirreessifataa ture.
Boggaaleen kantiibaa magaalaa naqamteeti..haa ta’u malee duras maqaa isaa maxxansinee turre innis hojiin kun akka isa hin ibsine nutti himee ture! nutis irra dabarre haa ta’u garuu #Boggaaleen humna makkalaakiyaa abdatee magaalattii keessa itti ejjetee ijoollee keenya ukkaamsisaa akka jiru ragaa qabatamaan irra geenyeerra…maqaa namootas keessumaa baase ijoolleen abalu abalu jedhaman ukkaamsamuufis ta’e ajjeefamuuf carraan tokko kennamuufii qaba jedhee afaan isaatiin dubbatee jecha isaatinis mirkaneessera..atis daa’ima haadha hiyyeessa ukkaamsiftee,,ajjeesistee akka ati hin teenye ammuman si beeksisa..guyyaan har’a siif bari’e kun nuuf dabareen isaa boor akka ta’e hubadhu..eessattuu yoo miliqxe bakka ati itti miliquuf jettus dursinee bira geenyeera..gantuun gantuudhuma.
Naqamte akkanatti wayyanee dura dhabbatanii Abiy fi Lammaa angootti ol-baasuu fi TPLF angoo irraa buusuu irratti qooda fudhatani… har’a Abiy Wallaga xiyyaaraan haleeluun duunummaa hora malee Emiyee Ethiopia keessaniif nagaa hin argamsiisu!! Isan ammoo Xayyaarran dhahaa jiran
#Harka harka nyaate.
Mootummoota biyya kana bulchanii darban keessatti mootummaan garaa jabaatee saba oromoo xiyyaaraa waraanaan rukute hin turre.
Guyyaa kaleessaa garuu qellem wallagga aanaa Gidaamii ganda Qellem keessatti hadhooftuu seenaan hin daganne raawwatee jira.
Kaambii waraana #wbo ti jedhanii mana baruumsaa fi moora warri karaa baasan keessa turan boombii samii irraan gadi itti roobsanii jiru.
Gochi kun amaloota abbaa hirreeti.
Waan haaraas miti.
Mootummaan TPLF waggaa 27 biyya kana hunkuraa tureyyuu xiyyaara waraanaan biyyi kun dhawamtees hin beektu.
Garuu utuu oromootu biyya bulcha jennuu oromoon oromoo irratti gocha qaanessaa akkasii waawwachuun salpina seenaan hin daganneedha.
Uummatni qe’ee fi qabeenya isaa irraa godaanee bosona keessatti baqatee jira.
Harki harka nyaate garaa na nyaatee jira.
Abon Dhaabakoo Ganamaati
Oromoof Waaqatu Lola: Osoo Ishiin Aangoof Jettee Ummata Qulqulluu Xiyaaraan Boombii Itti Roobsituu Daandiin Gara Jibuutii Deemu Mormii Ummata Affaariin Bordoddeetti Cufame.
OPDO Gantuun Akkuma Bara 1983 Diina Wajjin Shira Xaxxee Oromiyaa Gorbummaa Jalatti Kufiste Ammas Habashaa Jala Galtee ABO Irratti Waraana Labsite.
Lama Nansuufani Jette Jaartiin
Gantuun Lama Nungarboomsitu.
OMN:komii qonnaan bultoota G- Shawaa bahaa Aanaa Dugdaa ganda shubee gamoo(Amaj,14,2019)